नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : गुल्मी जिल्लाको रिडी बजारमा हरीबोधनी एकदशी र द्वादशीको दिन मनाइने ऋशीकेश उत्सब, जान सकिएन, भिडियो हेरेर मन बुझाउँ !
गुल्मी जिल्लाको रिडी बजारमा हरीबोधनी एकदशी र द्वादशीको दिन मनाइने ऋशीकेश उत्सब, जान सकिएन, भिडियो हेरेर मन बुझाउँ !
०६९ मंसिर१० गुल्मी जिल्लाको रिडी बजारमा प्रत्येक बर्ष हरीबोधनी एकदशी र द्वादशीको दिन मनाइने ऋशीकेश उत्सब आज धुमधाम सँग मनाइएको छ्। बिहान रथयात्रा कार्यक्रमका मुलपाले प्रवेश कसजूको घर बाट पञ्चेबाजा सहीत फुलपाती,फलफुल तथा प्रशादहरु ऋशीदेश मन्दिर लागिएको थियो। मन्दिरमा ऋशीकेश भगवानको बिशेष
पूजा पस्चात दिउँस तीन बजे रथयात्रा निकालीएको थियो। रथलाई रिडी बगर,बसपार्क,मध्य बजार हुँदै बिष्णु पञ्जर सम्म परीक्रमा गराइएको थियो। कार्यक्रममा स्थिनिय विद्याज्योती बोर्डइङ स्कुल र रुरु प्राथमिक बिद्यालयका विद्यार्थीहरुले मार्चपास गरेका थिए। रथ यात्रामा बिगतका बर्षहरुमा भन्दा निकै धेरै संख्यामा जात्रुहरुको उपस्थिती रहेको थियो। भिडियो हेर्नुहोस !!!!!
Posted by www.Nepalmother.com at 8:38 PM